ဤ MOOC သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်ရေးသင်တန်း၏ တတိယအပိုင်းဖြစ်သည်။
3D ပရင်တာများသည် အရာဝတ္ထုများထုတ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းကို တော်လှန်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ သူတို့က မင်းကို ခွင့်ပြုတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပါ။ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ။
ဒီနည်းပညာက အခုမှစတာပါ။ fablabs တွင်လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သည်။.
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းလည်း ရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများ၏ R&D ဌာနများတွင် အသုံးပြုသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် ဤအရာက ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေပါသည်။
၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို စမ်းသပ်ရန်၊ ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့် အရာဝတ္ထုအသစ်များကို အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖန်တီးရန် 3D ပရင်တာများကို အသုံးပြုပါ။
ဒါပေမယ့် အတိအကျပြောရရင်၊ 3d ပရင်တာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ? ဤ MOOC တွင် သင်သည် လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များကို နားလည်လိမ့်မည်။ 3D မော်ဒယ်မှ ပုံနှိပ်ထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုသို့ ပြောင်းပါ။ စက်ဖြင့်
3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း။ ဒီဇင်ဘာလ 9, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် ပရောဂျက် 2019 ၏ မရှိမဖြစ် နှင့် ပရောဂျက် အွန်လိုင်း (2019/365)
လွန်ခဲ့သောဗျူဟာမြောက်မေးခွန်းများ- ပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာတွင် နားလည်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။